Carson Wentz Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
musha NFL Vatambi Bio Carson Wentz Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
NFL Vatambi Bio
Yedu Carson Wentz Biography inokuudza chokwadi nezve yake yehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Wife (Madison Oberg), Mwanasikana (Hadley Jayne Wentz).
Moreso, vanun'una vekotabackback (Zach Wentz naLuke Wentz), Hupenyu hwePamoyo, Mubhadharo, mambure akakosha uye Lifestyle.
Basa pano ndere kuratidza tsananguro yakadzama yeiyi American nhabvu quarterback mune yakajeka mazwi. Yedu nyaya yakatanga paakasvika pano pasi kusvika ave zita remumba mu rugby nhabvu.
Kuti ufadze zvaunofarira pane yedu nhoroondo, tarisa iyo mifananidzo yezvinoitika zvakakomberedza hupenyu hwake kubva pakutanga chaipo.
Carson Wentz Biography - Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nhau.
Ehe, isu tese tinomuziva nekuda kwesimba rake-rekuchinja kugona uye kuzvidzivirira sekotaback muNFL. Hunyanzvi hwake uye hunhu hwakasiya hwasiya vazhinji vachishamisika vachiri pakutamba.
Zvisinei nezvaakaita, takaona vanhu vazhinji vasinganyatsonzwisisa nhoroondo yeupenyu hwake.
Naizvozvo, tafunga kuti zvine hungwaru nemufaro wese kukuunzirai nyaya inonakidza yaCarson Wentz uye kuparara kwezviitiko zvake zverugby. Saka, pasina imwe ado, ngatitangei.
Carson Wentz yehucheche nyaya:
Tisati tatanga, ngatitaurei nezvenhoroondo yake yekuzvarwa. Carson Wentz akauya munyika ino musi wa30 Zvita 1992 kuna amai vake, Cathy Domres nababa, Doug Wentz, muRaleigh, North Carolina (NC), USA.
Iyo quarterback prodigy akazvarwa ari mwana wepakati pakati pevakoma vake vaviri (Zack Wentz naLuke Wentz).
Carson Wentz nevanin'ina vake vaviri vakaberekerwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vavo (Doug Wentz naCathy Domres), vane mufananidzo uri pazasi.
Tarisa vabereki vaCarson Wentz - amai vake, Cathy Domres uye baba, Doug Wentz.
Hupenyu hwepakutanga uye Makore eKukura eCarson Wentz:
Kunyangwe akaberekerwa muRaleigh, nyeredzi yerugby nemhuri yake vakatamira kuNorth Dakota (ND), kwaakange akura.
Carson Wentz aive matatu apo Baba vake, Doug Wentz, vakaita kuti mhuri ifambe. Nekuda kweizvozvo, kuzhinji kwekudzidziswa kwake kuchikoro kwakaitika muND.
Mufananidzo wekutanga waCarson Wentz.
Muchokwadi, panguva yehudiki hwake, aive nechido chebasketball uye baseball zvakabudirira, pamwe neAmerican Football.
Zvisinei, bhora rerugby rakatora chikamu chiri nani kwaari. Carson Wentz aive mutete uye aine chimiro chisina kusimba.
Mufananidzo waCarson Wentz mushure memutambo webaseball.
Haana kumbozeza kutaura asi akatamba chero chinzvimbo chaaive apihwa. Yakazozivikanwa gare gare kuti akanyora nezvekuti aida sei kuva mutambi wenhabvu panguva yegiredhi rechipiri kuchikoro.
Kukura nguva pfupi muNorth Dakota.
Kukwikwidza kwake kwaizomuendesa mukugona. Nekudaro, aive anoshingairira veMinnesota Vikings fan. Uye zvakare, akanamata aimbova ngano yeGreen Bay Packers uye 2016 Pro Nhabvu Horo yeMukurumbira inductee QB Brett Favre.
Carson Wentz Mhuri Yemhuri:
Welfare ine zvakawanda zvekuita nekugona kwemunhu kuzadzisa zviroto nezvishuwo. Mhuri yaCarson Wentz yakanga isina nyaya mukupa zvakakosha zvekufambiswa kwemba.
Vaiva nemari yavaitambira uye yaingokwana kuriritira nhengo dzeimba yacho.
Baba vaCarson, Doug Wentz, aive mutsetse wekuchamhembe kuNorth State uye munin'ina wake aive mutambi we baseball wekutanga North Dakota State University (NDSU).
Kuvapo kwababa vake (Doug Wentz) nemukoma wake mukuru (Zack Wentz) sevatambi zvakare kwaingove kukurudzira muNational Football League (NFL) mutambi. Zvichakadaro, amai vake (Cathy Domres) vakapawo rutsigiro mutsika.
Mufananidzo weCarson wekutanga kusundidzira; baba vake (Doug Wentz) nemukoma wake mukuru (Zack Wentz).
Carson Wentz Mhuri Kubva:
Dzinza redu, vanodaro, rinotsanangura yedu yakasarudzika nhaka yekuziva. Nekudaro, kutsvaga kwemhuri midzi uye dzinza mavambo kunofumura hunhu, tsika, tsika, uye zvigadzirwa zvakaunzwa nezvizvarwa zvakapfuura.
Kunyangwe Carson Wentz akura kuNorth Dakota (ND), kwaakaberekerwa anoramba ari Raleigh muNC, dzimwe nguva inonzi Guta reOaks.
Baba vake, Doug Wentz, vane madzitateguru echiGerman asi vakagara muUS kwenguva refu. Saka, vabereki vake vese vane ropa rakazara vekuAmerica.
Saka nekudaro, mutambi weNFL ari, saka, muAmerican ane chena dzinza. Pazasi peichi nyora-kumusoro mufananidzo unopa ruzivo rweiyo nhabvu midzi.
Mepu inoratidza mhuri yaCarson Wentz.
Carson Wentz Ekutanga Basa:
Semunhu aida zvemitambo, Wentz akatamba nhabvu, baseball, hockey, uye basketball kubva achiri mudiki. Pakazosvika gore repamusoro, aive akareba mamita matanhatu uye mashanu masendimita. Kukura kwake nekukurumidza kwakamupa mukana pamunda. Asi, kana asiriye akanakisa, anga asina kukwana zvakakwana.
Sezvo nguva yakafamba, nhabvu yakava mitambo yake yakasarudzika. Basa rake renhabvu rakatanga kukoreji ne'North Dakota State Bison nhabvu timu, iyo yaakakunda nayo mashanu akateedzana "Nhabvu Championship Diki" (FCS) mazita Ona zvakaita Carson Wentz panguva iyoyo.
Mufananidzo waCarson Wentz pakutanga kwebasa rake rebhora.
Carson Wentz Dzidzo:
Semudiki chap, akaenda 'Century High School' muBismarck. Paaiva kuchikoro chesekondari, akatamba se quarterback uye kudzivirira shure kwechikwata chake chebhora rechikoro.
Carson aive akanaka muzvidzidzo uye akapedza kudzidza semufundisi wekirasi yake.
Century High School Horo yeMukurumbira, uko Carson Wentz inoonekwa pamwe nenzvimbo yacho.
Muna 2011, akabva ajoina iyo NDSU. Na2015, akapedza koreji basa rake rechitatu munhoroondo yechikoro aine 4.0 GPA. Carson akapedza kudzidza nedhigirii mune yemuviri uye hutano dzidzo.
Chiratidzo chakajeka chemunda wechidiki uchiri ku NDSU.
Paakapedza kudzidza, akawana mibairo se "Yedzidzo Yese-American ye2015," yakapihwa ne "Koreji Yemitambo Yemashoko Vatungamiriri veAmerica." Carson Wentz akakunda iyo 2015 mubairo kaviri.
Carson Wentz Biography - Mugwagwa kune Mukurumbira Nyaya:
Nguva pfupi yapfuura kudzidza, Carson akawana nzvimbo ne 'Philadelphia Eagles' yeNFL Draft yekutanga 'seyechipiri chevhoti muna 2016. Ipapo, akasainwa kondirakiti yemakore mana nechikwata.
Carson akachengetedza nzvimbo ne 'Philadelphia Eagles' yeNFL Draft yekutanga 'seyechipiri sarudzo.
Muvhiki yake yekutanga yemutambo wenhabvu, akawana zita repamutemo rekutanga uye akagamuchira 'Pepsi NFL Rookie yeVhiki.'
Uye zvakare, Carson Wentz akahwina zvakare iyo NCAA Division I Championship Game Yakanyanya Kushamisa nhabvu Mutambi mu2015 uye 2016.
Carson Wentz kuhwina iyo NCAA Chikamu I Championship Mutambo Wakanakisisa Wenhabvu Player muna 2016.
Carson Wentz Biography- Simuka Mukurumbira:
Munguva yeNational Soccer League (NFL) mwaka wa2017, Carson Wentz aive nezviratidzo zvinoyevedza nechikwata chake muPhiladelphia Eagles. Aive nemakumi maviri nematanhatu ekupedzisa, mazana mana nemakumi mana ekupfuura kuyedza, 265, 440 achipfuura mayadhi, uye makumi matatu nematatu apfuura
A gallery yezviitiko muna 2017.
Nekuda kweizvozvo, akahwina NFC Inogumbura Player yeVhiki uye nemwedzi, zvichiteerana. Chikwata chakaonawo nhoroondo apo Wentz yakabuda seyekutanga quarterback kukanda pamusoro pe4,000 mayadhi mu2019.
Pazuva rechitanhatu raChikumi 6, Philadelphia Eagles yakaita kuti chibvumirano chaWentz chiwedzere kusvika muna 2019.
Iyo Star quarterback kubva zvino yakaramba iri munhu anokatyamadza uye ane Charismatic mutambo wemitambo, achiisa nhanho yekuti vamwe vatevere.
Kukunda pamberi peCarson Wentz kontrakiti yekuwedzera muna 2019.
Melissa Uhrich Carson Wentz Nyaya Yerudo:
Iye mutambi akapinda muhukama achiri mazuva ake ekoreji. Akave nehukama hurefu naMelissa Uhrich kubva pamazuva ake ekusekondari. Zvisungo zvaitaridzika semufaro sezvo ivo vakaonekwa vachionekwa pamwe munzvimbo dzeruzhinji.
Carson nemusikana wake wepakoreji, Melissa Uhrich.
Kusiyana naizvozvo, vakaparadzana muna 2017 nekuda kwezvikonzero zvinonyanya kuzivikanwa kwavari. Zvisinei, zvinoita sokuti kuparadzana kwacho kwakanga kwakabatana.
Julio Jones Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Nezvekureruka, Wentz akazunungusa chikara uye akaramba kurega kuwana rudo rwehupenyu hwake. Saka, akasangana ndokutanga kufambidzana naMadison Oberg mu2017.
Carson pane zuva naMaddie Oberg.
Iye mwanasikana waLisa Broughton naBrian Oberg uye anobva kuLexington, Kentucky.
Wentz akazivisa kufambidzana kwake naMaddie Oberg mushure mekukunda kwechikwata mumutambo weSuperbowl musi wa6 Kukadzi 2018.
Mufananidzo unopenga nerudo rwehupenyu hwake, Maddie Oberg.
Mushure mekufambidzana kweanopfuura mwedzi gumi nembiri, shasha yenhabvu yakaroora Madison Oberg pazuva re16th raJuly 2018. Ivo vaviri vane mwanasikana wekuratidzira kumuchato.
Nezve Vana vaCarson Wentz:
Makore maviri mushure mekunge Carson asunga mapfundo nemukadzi wake, Madison Oberg aive nemwana musikana uye mwanasikana wavo wekutanga anonzi Hadley Jayne. Mwana akazvarwa pazuva re27th yaApril 2020.
Carson, Maddie nemwanasikana wavo wekutanga anonzi Hadley Jayne.
Zvinofadza, vaviri ava vazivisa kuti panosvika June 2021 kuti vanga vachitarisira mumwe mwana pamwechete.
Carson Wentz Hupenyu Hwemhuri:
Pasina kupokana kuti runyararo uye kudziya kwemamiriro epamba akakurudzira kugara kwaCarson Wentz kubudirira.
Chisungo pakati penhengo dzemhuri chaive chakakora uye chakakodzera kutevedzerwa. Saizvozvo, ngatitorei nguva ino kuti titaure zvakadzama nezve imwe neimwe yadzo.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Carson Wentz Baba:
Iyo Rugby nhabvu prodigy anofanira kunge akavandudza kufarira kwake kukuru uye kuda zvemitambo nekuona uye kuve pedyo nababa vake (Doug Wentz).
Carson Wentz baba vaimbova mubhangi kuBismarck. Aive zvakare nebasa rekoreji semutsetse wemutsara kuNorthern State muAberdeen.
Pixi wababa vaCarson Wentz; Doug Wentz.
Doug Wentz angadai akasimba kune linebacker uye nekukurumidza kutenderera nzvimbo yekunze uyezve kune quarterback. Chinangwa chinowanzo kuve chekuwedzera kumhanya kudzivirira kana kupfuura senzira yekudzivirira.
VaPatrick Mahomes Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Facts
Kunyangwe aimbove akaroora kuna Cathy Domres, mubatanidzwa hauna kuzombogara. Zvisinei, Doug Wentz akaroorazve naLaurie Wentz, asi havana mwana pamwechete.
Pix yekutanga yaDoug naLaurie Wentz.
Zvimwe pamusoro paamai vokurera vaCarson Wentz:
Laurie Wentz ndiManeja weHofisi kuQuality Title Incorporation muNorth Dakota.
Agara ari muzvinabhizimisi uye akamboshanda mubhangi kuBismarck, ND, United States. Ane mwanasikana kubva kuhukama hwake hwekare anonzi Bailey.
Mutungamiri wehofisi; Laurie Wentz.
Nezve Amai vaCarson Wentz:
Cathy Domres, ikozvino Cathy Anhalt, ndiye amai vaCarson Wentz. Nekudaro, akapatsanurwa nababa vaCarson, anga achigara achitsigira zvakazara kune Star Quarterback kubva paudiki.
Sangana naCarson Wentz naAmai vake (Cathy Domres).
Iye ndiye akawana zvitoro zveCarson kushandisa simba rake mushure mekuona kuti aive nesimba rakawanda nekuda kwekusagadzikana kwake. Iye anoshanda neAmerican Heart Association. Cathy akaroorazve naKevin Anhalt asi haana mwana kwaari izvozvi.
Nezve Carson Wentz Siblings:
Sezvatakambotaura kare, Carson Wentz ndiye wepakati mwana ane hama pamberi pake inonzi Zack Wentz. Uye zvakare, ane imwe hama inonzi Luke Wentz. Ngatitarisei pavakoma vake vese.
About Carson Wentz Mukoma - Zack Wentz:
Bison baseball alum, Zach Wentz, ndiye mukoma wedangwe waCarson Wentz. Iye zvakare mutambi uye anove akagadzirira kuve mumwe wevatambi vepamusorosoro kunze kweguta reBismarck, kuve katatu-nguva All-State mutambi weCentury High School.
Carson Wentz mukoma mukuru, Zack Wentz.
Nguva pfupi apedza kudzidza, Zack akaedza ruoko rwake kunyanzvi baseball. Yakanga iri danho raitarisirwa nevaiona Wentz ichitamba.
Nekudaro, Wentz aive nemuono wakasarudzika wehupenyu hwake. Akaisa mutambo parutivi ndokutanga hupenyu hwesevhisi, zvese mhuri yake uye hwaro hwaCarson.
Nezve Carson Wentz Mukoma - Luke Wentz:
Isu tinoziva kuti Last borns vanowanzokwanisa kukwezva uye kubvisa zvombo zviri nani kupfuura vakura vanozvarwa.
Vanowanzo kuve vanosetsa, vanonzwisisa uye vane mukana wakakura wekuve vanyanyi, vatambi nekuda kwekuti vanodzidza hunyanzvi hwesimba mukamuri yekutamba.
Zvino, iyi ndiyo yakawanda yaLuke Wentz. Ndiye munun'una waCarson Wentz uye wekupedzisira akazvarwa mumba.
Kunyangwe hazvo Luke Wentz achiri kuchikoro panguva yekunyora uku, mushumo une kuti anga achitenderera nzvimbo dzakasiyana, achizviitira mafaro.
Munun'una waCarson Wentz, Luke Wentz.
About Carson Wentz Relatives:
Iyo rugby prodigy zvirokwazvo ine hama, babamunini, babamunini, babamunini, babamunini, nasekuru nasekuru. Asi, zvinosuruvarisa, ruzivo diki ruripo pamusoro pavo. Mukupesana, ane hanzvadzi-nhanho-inonzi Bailey.
Amai vokurera vaCarson; Laurie naStepister wake, Bailey.
Carson Wentz Hupenyu hweMunhu:
Kutarisisa padiki rugby nhabvu prodigy inofumura hunhu hwawaisambo kumbofunga nezvazvo; mukurumbira wake unonyengetedza mafeni mazhinji kuti ari 100% akakwana. Nekudaro, Carson, sekungoita rwiyo rwakakurumbira, munhu chaiye.
Capricorn zodiac muKristu uye anofarira kuvhima, kuenda kumadhamu, kuzorora neshamwari, uye kupedza nguva nembwa dzake dzekutora zvegoridhe (Henley neJersey). Ane fan fan inokura inotevera pasocial media.
nguva yekunakidzwa nekuvhima nembwa yake.
Vazhinji vevateveri vake vanomuenzanisa iye neQB Dak Prescott, asi aratidza kuti havana kufanana. Iye anosarudza akawanda akavhurika-emhepo kurovedza uye kurovedzwa muGym.
Kunyanya zvakadaro, Kuverenga magazini, kutarisa TV nhepfenyuro uye kutamba mitambo yemavhidhiyo hakuna kusiiwawo kunze. Pandinofunga nezve maSuperstars maviri, ndinorangarira vhidhiyo iyi.
Carson Wentz Mararamiro:
Sekureva kweCBS Sports, anoverengera No1 maererano ne Chikuru munhu akafa mari mhosva nguva dzese. Kune mutambi ane mukurumbira wakawanda uye inoenderana nemari mabhenefiti, umbozha hwunotengeka.
Wentz anoda mota dzemhando yepamusoro; garaji rake rinozara nemakwenzi mashoma akanaka seCadillac, Range Rover naCorvette.
Carson Wentz neimwe yemota dzake dzoumbozha nembwa dzinodhura.
Ane Lamborghini inoita $ 450,000. Uye zvakare, iye zvakare ane imba yepamusoro muPhiladelphia. Tinofungidzira kuti nzvimbo yacho ingangosvika madhora zviuru zvitanhatu. Mutambi wenhabvu weRugby akange aine imba yeSalem County muSouth Jersey.
Salem County imba muSouth Jersey.
Mari uye Net Kukosha:
Carson Wentz ari pakati pevatambi venhabvu veAmerica vanobudirira. Kwekutanga sosi yemari yake kunobva kune rake rakabudirira basa muNFL. Sekureva kwa Sportrac, ane mambure akakosha emadhora makumi mana nemashanu kusvika pagore ra 45. Pamusoro pezvo, muhoro wake wepagore unosvika madhora miriyoni nemazana matatu.
Nekuda kwekuita kwake kwakatanhamara, mutambi weNFL akasaina makore mana erookie dhizaini inosvika $ 26.67 mamirioni muna 2016. Zvisinei, kondirakiti kubva kumakondo yakawedzerwa muna 2019, ikozvino yaita madhora zana nemakumi masere nemana emadhora.
Saka, Carson saka yaizowana $ 32 mamirioni pagore kubva pachibvumirano kusvika mwaka wa2024. Icho chihombe chakakura chakambovimbiswa kune mutambi muNFL nhoroondo.
Carson Wentz ane yakasimba robhoti portfolio ine mukurumbira zviitwa mune rake basa, achiwana $ 5 Mamirioni pagore. Akasaina madhiri nemamwe makambani: Nike, Bose mahedhifoni, Bobcat, Amazon, Scheels nePhiladelphia based energy energy NRG.
Carson Wentz Untold Chokwadi:
Asides kubva kune info yataurwa pamusoro, hezvino zvakakosha nezve iyo nhabvu quarterback iyo inokushamisa iwe.
Chokwadi # 1: Tattoo paruoko:
Nyeredzi yerugby yakanyora mumuviri wake mapatani akasiyana e tattoo. Semuenzaniso, paruoko rwake, akacheka nyora inoti "Vateereri veMumwe," chirevo ichi, anodaro, chakaumba hupenyu hwake. Paari paruoko rwake pane iyo inoverenga 'Agape'.
Mufananidzo unongoratidzira imwe chete yematatoo ake mazhinji.
Chitauro chechiuno chinoreva "kurarama kuna Ishe sevateereri vangu, kuyedza kukudza zvese." nepo izvo zviri pamaoko zvichireva rudo rusina mwero.
Chokwadi # 2: Chekutanga basa semubatsiri:
Kune mukwikwidzi wemitambo saCarson, akagona mazhinji emitambo yebhora yaakatamba. Ruzivo uye zviitiko izvi zvakamupa mukana wekuva mukuru wepamberi pamitambo yevechidiki baseball. Ndiro raive basa rake rekutanga chairo.
Chokwadi # 3: Kubatira vanhu:
Pasina kukanganiswa nekubudirira kwake, Carson Wentz achiri kuda kugovana adzokere kunharaunda yake. Iye anoita akawanda anobatsira uye masangano. Wentz yakaunganidzawo mari kuburikidza nemitambo yerudo softball.
Akatangisa hwaro hwake, iyo AO1 Foundation, kusimudzira vechidiki vanotambura, vakaremara mumuviri, uye varwi vemauto.
Mutambi weNFL akatangawo chirongwa pamwe chete nechinangwa chetariro Haiti. Iyo mission inoronga kuvhura nyowani yemitambo nzvimbo yevechidiki vari munyika.
Pfupiso ine basa retariro Haiti pane iri Chipiri.
Chokwadi # 4: Kufanana kunoshamisa nePrince Harry:
Kana iwe waona imwe ye Mambokadzi Elizabeth II's vazukuru Sons (Muchinda Harry), tinovimba iwe kuti utende kuti ropa rehumambo reBritain rine hukama naCarson Wentz.
Kuzivikanwa kwacho kunoshamisa, vachitarisa hunhu hwavo hwepanyama kubva pabvudzi bvudzi kune chimiro chebvudzi, ruvara rweziso, chivara, mhino, kunyemwerera, uye nezvimwe zvakawanda. Mufananidzo uri pazasi we Prince Harry uye Carson Wentz zvechokwadi angakushamise iwe.
Kufanana kusanzwisisika pakati paCarson Wentz naPrince Harry.
Chokwadi # 5: Chiitiko Chekurima:
Sezvo akakurira kumaruwa, kurima hachisi chinhu chitsva kwaari. Munguva yedenda muna 2020, iyo Star quarterback yakabatanidzwa mukubvisa purazi rake idzva kuti avake nzvimbo dzekudya papurazi rake idzva muTexas. Ona pazasi pikicha yake neBobcat compact track loader.
Carson papurazi rake netarakita plus chiguti chinogumburudza chakasungirirwa.
Chokwadi # 6: Yakanonoka Quarterback kutamba:
Waizviziva here kuti Carson Wentz aifanira kumirira makore matatu kuti atambe quarterback kuchikoro chesekondari, uyezve mamwe matatu kukoreji.? Aigutsikana nekutamba chero chinzvimbo chaakapihwa pakati peizvi zvese uye aiita chikamu chimwe nechimwe zvakanaka.
Iyo quarterback champ pane yake yepamusoro.
Carson Wentz Biography Pfupiso:
Kuti uwane pfupiso yekukurumidza yehupenyu hwake nhoroondo, Shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezve iye anozivikanwa quarterback player.
Carson Wentz 'Bio Dhata
Zita rizere: Carson James Wentz
Zita rekudanwa: TQC (Makota Matatu-Carson)
Zuva rekuzvarwa: 30th yaDecember 1992
Nzvimbo yekuzvarirwa: Raleigh, North Carolina, USA
Basa: American nhabvu Player
Dzidzo: Bismarck (ND) Century High Chikoro uye North Dakota State University
Wife / Wawakaroora: Maddie Oberg
Baba: Doug Wentz
Amai: Cathy Domres
Vanun'una (Vakoma): Zach Wentz naLuke Domres
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Capricon
kukwirira: 6 ft 5 inches (1.96 m)
Net Worth: $ 15 mamirioni approx
Carson Wentz Biography uye Yevacheche Nyaya ndeye kushevedzwa kune basa kune chero mutambi ari kubuda kana kuda-kuve shasha mumhanyi. Akazobatanidzwa mumitambo yakasiyana-siyana yemitambo asati asarudza kugadzirisa Nhabvu yeAmerica.
Kwaive kuda kwake kwete mukurumbira kana hupfumi izvo zvakamuchengeta ari pamucheto wemutambo wake. Kuwanikwa kwake kwakatungamira mukukudza hunyanzvi hwake hwekota kudzamara aita nhoroondo.
Tinovimba kuti wawana ino yekunyora-inoburitsa pachena uye yakazara nezvidzidzo. Ita zvakanaka kuti urambe wakabatana kune zvimwe Biography chokwadi nezveNFL Stars nekurongeka kwepamusoro-soro.
Childhood Biography Diary- yeNFL PLAYERS
Dak Prescott Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Matthew Stafford Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Tom Brady Mwana Wechiitiko Nyaya Dzimwe Untold Biography Facts